ဂျပိန်တာယာများနှင့်ဆိုင်သောစက်ဘီးများဟုခေါ်သည်။ - အကောင်းဆုံးအဖြေများ
အဓိက > အကောင်းဆုံးအဖြေများ > ပါးလွှာဘီးဆိုင်ကယ် - ရှင်သန်နိုင်သောဖြေရှင်းနည်းများ
ပါးလွှာဘီးဆိုင်ကယ် - ရှင်သန်နိုင်သောဖြေရှင်းနည်းများ
လမ်းမစက်ဘီးချောချောမွေ့မွေ့ခင်းပြီးလျင်မြန်စွာစီးရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ သူတို့ချောချောမွေ့မွေ့ရှိတယ်ဂျပိန်တာယာများနှင့် 'drop' လက်ကိုင်များနှင့်လမ်းပေါ်တွင်ပြိုင်ကားများအတွက်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ သူတို့ကများသောအားဖြင့်အခြားအမျိုးအစားများထက်ပိုမိုပေါ့ပါးဖြစ်ကြသည်စက်ဘီး။ သူတို့ကိုကျောက်ခင်းလမ်းများပေါ်တွင်စီးနင်းနိုင်သည်၊ သို့သော်လူအများစုကသူတို့ကိုမသက်မသာနှင့်မသန့်ရှင်းသောလမ်းကြောင်းများ၌မတည်မငြိမ်ဖြစ်နေသည်ကိုတွေ့ရှိသည်။
အခုသင် Biketech ကိုအာရုံစူးစိုက်စွာအာရုံစိုက်မယ်ဆိုရင်ကျယ်ပြန့်တဲ့ချိတ်ဆက်မှုနဲ့အနားကွပ်တွေအပေါ်ကြီးမားတဲ့ဖိအားပေးမှုတွေကိုသတိပြုမိလိမ့်မယ်။ ဒီကြီးမားတဲ့တိုးတက်မှုဘာကြောင့်လဲဆိုတာကိုသင်အခုနားမလည်နိုင်ဘူး၊ ဒါပေမယ့်ငါတို့ကတူးဆွပြီးရှာဖွေတော့မယ်။ မကြာသေးမီကကျွန်ုပ်တို့စဉ်းစားခဲ့သောအကြောင်းအရင်းမှာ n B ၏အသစ်နှင့်တင့်တယ်လှပသော SES 4.5 aar disc ဘီးများအခြားတစ်နေ့တွင်၎င်းတို့သည်ပုံမှန်အားဖြင့် mb ဖြစ်သည်။ သူတို့သည်ရှေ့နှင့်နောက်၌ကွဲပြားခြားနားသောအနားကွပ်အနားကွပ်များရှိသည်၊ Chris King နှင့်ဆက်စပ်နေသည်။ အချက်အချာကျပေမယ့်သူတို့ဟာစိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းတဲ့နည်းနဲ့မြေကြီးသစ်ကိုချိုးဖောက်တဲ့အတွက်သူတို့ဟာမနာလိုဖြစ်ကြတယ်။ သူတို့ဟာ disc တိကျတဲ့အနားကွပ်ပရိုဖိုင်းနဲ့စခဲ့ရတယ်။ ပြီးတော့ဒီစက်ဘီးတွေကိုကျွန်တော်ဟာ ၃၁ နဲ့တိုင်းတာခဲ့တဲ့လမ်းဘေးဆိုင်ကယ်တစ်စီးမှာကျွန်တော်ဘာကြောင့်တွေ့ခဲ့ရတာလဲလို့ရိုးရိုးသားသားပြောခဲ့တယ်။ တစ်ဝက်မိုင်အကျယ်အကျယ်အကျယ် ၂၅ မီလီယံအတွင်းအနားကွပ်အကျယ်အကျယ် ၂၅ မီလီအကျယ်အကျယ်အကျယ် ၂၅ မီလီယမ်အတွင်းပိုင်းအနားကွပ်အကျယ်ဒီဇိုင်းသည်မကြာသေးမီကပြုလုပ်ခဲ့သောလမ်းဆိုင်ကယ်ဒီဇိုင်းကိုပြုလုပ်နိုင်မှသာပြုလုပ်ခဲ့သည်။
သူတို့ဟာတိကျတဲ့အရာမဟုတ်တဲ့အတွက်ပိုကျယ်ပြန့်နိုင်တယ်လို့ဆိုလိုတယ်၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ calipers ကအနားကွပ်အကျယ်ကန့်သတ်ချက်မရှိဘူး။ ပြီးတော့သင်မတိကျတဲ့ထပ်ခါထပ်ခါထပ်ခါထပ်ခါထပ်ခါထပ်ခါထပ်ခါထပ်မံမပြောရတာကြောင့်သင်ဟာအဲဒီ့ calipers ကထပ်မံကန့်သတ်မထားခြင်းကြောင့်တာယာရှင်းလင်းခြင်းများစွာရှိနိုင်ပါတယ်။ စဉ်းစားပြီ၊ ကန ဦး မေးခွန်းကဘာလဲ၊ ဒါဆိုဘာလို့ဒီတာယာတွေကပိုကျယ်ပြန့်လာတာလဲ။ ripsnow သည်စိတ်ဝင်စားစရာအကောင်းဆုံးတစ်ခုဖြစ်သည်။ သို့သော်ကျယ်ပြန့်သောတာယာများသည်ခုခံနိုင်စွမ်းကိုလျော့နည်းစေသောအထင်ရှားဆုံးအားသာချက်များဖြစ်သည်။ rollin တည်ရှိမှုရက်စွဲများအမှန်တကယ်ထွက်ခွာသွားကတည်းကဒါပေမယ့်ဒီနေဆဲနှင့် 28C တာယာပျမ်းမျှ2မှ3watts က၎င်း၏ညီမျှ 25C တာယာများထက်တစ်ဘီးနှုန်းထက်ပိုမိုမြန်ဆန်သောကြောင့်ဤအိတ်ကိုတွေ့သောအခါအဘယ်သို့ငါတို့သိရရန်ခဲယဉ်းသည်။ 40 မှာသိခြင်းနှင့်ခြားနားမှုသည် ၂၃ တွင်ပိုကြီးသည်။ အကြောင်းပြချက်သို့မဟုတ်အနည်းဆုံးသီအိုရီမှာယင်းသည်တာယာအဆက်အသွယ်အစုအဝေး၏ပုံသဏ္toာန်ကြောင့်၊ တာယာပိုမိုကျယ်ပြန့်ခြင်း၊ အဆက်အသွယ်ပြshနာတိုလေ၊ တိုးတက်လာသောတိုးတက်သည်။ ယခုတွင်အလွန်အရေးကြီးသည်၊ သို့သော်အကျိုးကျေးဇူးများကိုအမြင့်ဆုံးရရှိစေရန်သင်သည်ကျယ်ဝန်းသည့်အနားကွပ်နှင့်ကျယ်ပြန့်သောတာယာနှစ်ခုလုံးလိုအပ်သည်ကိုမသိပါ၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ဤအဆက်အသွယ် patch ပုံစံကိုစဉ်းစားသောအခါတာယာ၏အကျယ်профиляသည်အလွန်အရေးကြီးသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ , သို့သော်ပုဆိန်ဖြတ်ကူးခြင်းပရိုဖိုင်းသည်တာယာအတွင်းရှိကျစ်ကျစ်လစ်လစ်ရေးအတွက်လည်းအရေးကြီးသည်။ ဖိအားသည်အလွန်နိမ့်သည့်အချိန်တွင်သင်ရရှိသောခံစားချက်နှင့်တူသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ဤအမှု၌လမ်းလွဲခြင်းသည်ဤအမှု၌ပွတ်တိုက်မှုနှင့်ပွတ်တိုက်မှုကိုဆိုလိုသည်။ လှိမ့်တွန်းမှုအားမြင့်တက်လာခြင်းကြောင့်ယခု ၂၈ စင်တီဂရိတ်မျိုချခြင်းကိုတွေ့မြင်ရပြီးယခုကျယ်ပြန့်သော entry-level အနားကွပ်တွင်မြင်တွေ့ရသည်။ ယခုအချိန်အထိအချိန်ကိုတိုင်းတာသည်မှာ ၃၁ အထိဖြစ်သည်။ ၄ င်းသည် cross-sectional profile သည်တကယ်ပင်စတုရန်း၊ ယခုရလဒ်များကိုယခုအခါဓာတ်ခွဲခန်းပတ်ဝန်းကျင်တွင်ကောင်းမွန်စွာညှိထားသောကိရိယာများတပ်ဆင်ထားသည်။ သို့သော်စက်ဘီးဖြင့်သုံးလတစ်ကြိမ်လမ်းလျှောက်နေသော The Open Roads တွင်စမ်းသပ်ခြင်းသည်ဓာတ်ခွဲခန်းစမ်းသပ်မှုများသည်အလွန်အရေးကြီးသည်ဟုဆိုသည်။ မောင်းနှင်မှု၏ရှုထောင့်နှင့်၎င်းသည်တုန်ခါမှုဖြစ်ပြီး၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အားအမှန်တကယ်နှေးကွေးစေသောပျော်ရွှင်မှုဖြစ်သည်။ မဟုတ်ပါ၊ အကြောင်းမှာကျွန်ုပ်တို့သည်ကျောက်တုံးကျောက်တုံးများလမ်းများပေါ်တွင်လမ်းလျှောက်သောအခါသို့မဟုတ်ကျောက်ခင်းလမ်းတွင်ကားမောင်းသည့်အခါထိတ်လန့်ခြင်းနှင့်တုန်ခါမှုသည်ရှင်းလင်းနေပုံရသည်။ ငါတို့နှေးလာတယ်၊ ငါတို့တကယ်ခံစားလို့ရတယ်၊ ဒါပေမယ့်ဘာလို့သာမန်ကိုကြည့်တာလဲ။ ကတ္တရာနှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်တို့တူညီသောကောက်ချက်မချခဲ့ပါ။ ကံမကောင်းအကြောင်းမလှစွာကျွန်ုပ်တို့သည်ဖိအားနည်းသည်ဟုဆိုပါကစက်ဘီးလေးပုံတစ်ပုံ ဦး ဆောင်မှုနှင့်ဖိအားလျော့နည်းသောပိုမိုကျယ်သောတာယာများသည်ပိုမိုခက်သောတုံးထက် ပို၍ မြန်သည်ကိုတွေ့ရှိရသည်။ ဆိုလိုတာကငါ ၂၈ မှာ psi ၅၀ ပဲရတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဓာတ်ခွဲခန်းထဲမှာပိုပြီးတင်းကျပ်တဲ့ဆုံးရှုံးမှုတွေလျော့နည်းသွားတာကြောင့်ပိုပြီးခက်ခဲတဲ့တာယာကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်လှိမ့်သွားစေတယ်၊ ​​ငါတို့ပြောခဲ့တဲ့တာယာကိုလှည့်ဖျားခြင်းနှင့်ပွတ်တိုက်မှုကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ဒါပေမယ့်မင်းတို့ရဲ့ဖိအားကိုလျှော့ချဖို့သတိရဖို့လိုတယ်၊ ဤအချက်သည်သင်နောက်တစ်ခါနှေးနှေးသွားလိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ခုခံအားကျဆင်းခြင်းကိုလျှော့ချခြင်းသည်ငါတို့အားလုံးအတွက်အားလုံးအတွက်ဖြစ်လိမ့်မည်မဟုတ်ပေ - သို့သော်တုန်ခါမှုကိုလျှော့ချခြင်း၏ကြီးမားသောအကျိုးကျေးဇူးသည်နှစ်သိမ့်မှုဖြစ်မည်ကိုငါသဘောပေါက်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့အတွက် Lacey အတွက်သင်ကမ္ဘာပေါ်တွင်အသက်သာဆုံးဘောင်ကိုစီးနိုင်သည်။ သို့သော် အကယ်၍ သင့်တွင်ကျဉ်းမြောင်းသောတာယာများရှိပါက၎င်းသည်ခိုင်မာသော၊ အဆင့်မြင့်သော ၂၈ စင်တီမီတာရှိသောတာယာများအဆင်ပြေမည်မဟုတ်ပါ၊ အခုကွေးနေပြီမျက်နှာပြင်တစ်ခုလုံးဆီပြန်ရောက်သွားပြီ။ Herer တာယာကလမ်းမှာပိုလုံခြုံတယ်။ အခုငါဝန်ခံတယ်။ တခါတရံငါအသက်ကြီးလာပြီလို့ခံစားမိပြီးအဲဒါကိုလုံးဝမစမ်းသပ်ချင်ဘူး၊ ဒါပေမယ့်ငါ့ရဲ့အမြန်နှုန်းမှာတောင်ငါမှီခိုတဲ့အခါလုံခြုံမှုခံစားရတယ်။ ပိုမိုကျယ်ပြန့်သောချည်နှောင်ခြင်း (d) လေအတိုးအကျယ်ချဲ့ခြင်း၏အခြားရှုထောင့်တစ်ခုရှိသေးသည်။ ဆိုလိုသည်မှာသင်သည်ဖိအားနည်းပါးသော်လည်းပင်ပြားချပ်ချပ်မဖြစ်သင့်ဟုဆိုလိုခြင်းဖြစ်သည်။ မင်းတို့ပုံမှန်ကြည့်တဲ့မှတ်ချက်ကနေမင်းဘာသင်ယူရသလဲ၊ ဘာကြောင့်လဲ၊ ဘယ်တော့လဲ၊ ဘာကြောင့်လဲ။ ချည်နှောင်ခြင်းများသည်အလွန်ကောင်းသည်၊ သို့မှသာကောင်းကျိုးများသည် ၂၅ ခုထိရှိနေဆဲဖြစ်သည်။ ကောင်းသည့်အချက်မှာအကောင်းဘက်ကအမြန်ဆုံးအရာကို ဦး တည်လေ့ရှိခြင်းကြောင့်၎င်းသည်ပထမ ဦး ဆုံးနှင့်အရေးကြီးဆုံးအချက်များရှိသည်။ ငါအစောပိုင်းကပြောခဲ့သကဲ့သို့, သင်အမှန်တကယ်ဖြစ်ရန် disc brake wheel လိုအပ်သည်။ ရွှေစင်များနှင့်ကျွမ်းကျင်သူများသည်၎င်းကိုကျွန်ုပ်မသုံးနိုင်သည်မှာသေချာပါသည်။ ထိုအခါပိုမိုကျယ်ပြန့်သောတာယာများသည်အနည်းငယ်လေးလံသည်၊ ၎င်းတို့သည်သူတို့၏ညီအစ်ကို ၂၅ ဦး ထက်လေးဘီးလျှင် ၂၀ ဂရမ်ခန့်ပိုကြီးပြီးထိုတွင်လည်းအချက်အလက်များရှိပါသည်။ ပိုမိုကျယ်ပြန့်သောတာယာများနှင့်အတူလေခွင်းအားနည်းချက်အနည်းငယ်ရှိသည်၊ ၀ န်ဆောင်မှုများသည်ပိုမိုကျယ်ပြန့်သောတာယာများနှင့်အတူလိုက်ပါရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားခြင်းကြောင့်အလွန်သေးငယ်သည်၊ သို့သော်သင်က23သို့မဟုတ် 25 အတွက်အနားကွပ်ဒီဇိုင်းတစ်ခုတွင်ပိုမိုကျယ်ပြန့်သောတာယာကိုရယူရန်ကြိုးစားနေပါကပြစ်ဒဏ်များသည် ပို၍ မြင့်မားသည်။ ပြီးတော့ဟုတ်ပါတယ်၊ ဟုတ်ပါတယ်၊ Pro Peloton ကိုတစ်ခါတစ်ရံရေနံတင်သင်္ဘောအဖြစ်ဖော်ပြနိုင်တဲ့အစဉ်အလာရှိတယ်။ လမ်းကြောင်းပြောင်းဖို့အချိန်အများကြီးကြာတယ်။ သိသာထင်ရှားတဲ့အားသာချက်ရှိပေမယ့် aerobike မသုံးသေးတဲ့ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တွေကိုတွေ့နိုင်တယ်။ တာယာများသည်နည်းနည်းနှင့်တူနိုင်သည့်သူတို့အတွက်။ ဒါဟာဘယ်လောက်ပြီးဆုံးသွားတာကိုကြည့်ဖို့စိတ် ၀ င်စားစရာကောင်းလိမ့်မယ်။ ငါဘယ်လောက် ၀ မ်းသာနေတယ်၊ ​​ဘုတ်အဖွဲ့မှာပါ ၀ င်တဲ့သူကငြင်းခုံရခက်တဲ့အချက်အလက်တွေကိုမတွေ့ရဘူး။ ဒါကြောင့်အနာဂတ်ကိုသင်မြင်ချင်ရင်အနာဂတ်မှာအခုနည်းနည်းပိုကောင်းလာမယ်လို့ငါထင်တယ်။ ငါစီးသောဤစက်ဘီးအကြောင်းအနည်းငယ်ပိုသတင်းအချက်အလက်နှင့်ဤငါတို့သည်ဤ setting များကိုအတိအကျနှင့်အတူ unboxing ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ရှိသည်, ဒါပေမယ့် mitad li, သင်တော့ဘူးအနိုင်ရနိုင်အောင်နိုင်အောင်တောင်းပန်သို့မဟုတ်လေတိုက်ဥမင်လိုဏ်ခေါင်းအတွင်းရှိ MVwheels နောက်ကွယ်မှမှတဆင့်နှင့်မှတဆင့်ဂုရုတွေ့မြင်ရုံကလစ်နှိပ်ပါ သင် GCN ကိုစာရင်းသွင်းထားကြောင်းသေချာအောင်ပြုလုပ်ရန်ကမ္ဘာလုံးကိုနှိပ်ပါ
လမ်းမစက်ဘီးရှိသည်ထိုကဲ့သို့သောပါးလွှာသောအဓိကအကြောင်းပြချက်နှစ်ခုအတွက်တာယာ။ ပထမတစ်ခုမှာတာယာနှင့်လမ်းအကြားထိတွေ့မှုနည်းသောကြောင့်ပွတ်တိုက်အားနည်းပြီး၊ဘီးစွမ်းအင်အသုံးစရိတ်၏တူညီသောအဆင့်တွင်အဆီတာယာထက်ပိုမြန်သည်။ ဒုတိယအချက်မှာအလေးချိန်ဖြစ်သည်။ Theပိုပါးလာတယ်တာယာသည်ပိုမိုပေါ့ပါးလာသည်။
အဘယ်ကြောင့်ရှေ့တာယာများသည်နောက်တာယာများထက်ကျဉ်းမြောင်းသနည်း။ ကျွန်ုပ်၏ Ducati Multistrada ကိုကြည့်သောအခါ၎င်းသည်ရှေ့တွင်ကျဉ်းမြောင်းသောတာယာရှိသော်လည်းနောက်ဘက်တွင်ပိုမိုကျယ်သောတာယာရှိသည်ကိုတွေ့ရသည်။ ဤသည်မှာမော်တော်ဆိုင်ကယ်အများစုအတွက်လည်းဖြစ်သည်။ အဲဒီလို့ဘာဖြစ်လို့? ပထမ၊ ရှေ့နှင့်နောက်တာယာများဘာလုပ်သည်ကိုစဉ်းစားကြည့်ကြစို့။
ရှေ့ဘီးသည်ကျွန်ုပ်တို့ကိုစတီယာရင်ခေါင်းပတ်ပတ်လည်တွင်လှည့်ခြင်းဖြင့်မော်တော်ဆိုင်ကယ်ကိုမောင်းနှင်နိုင်သည်။ ၎င်းသည်စတီယာရင်ခေါင်းပတ်ပတ်လည်လည်ပတ်ခြင်းသည်မော်တော်ဆိုင်ကယ်တည်ငြိမ်မှု၏အစိတ်အပိုင်းလည်းဖြစ်သည်။ နားလည်ရန်အဘယ်ကြောင့်ဤမျှအရေးကြီးသနည်း။ ကောင်းပြီ၊ ပိုမိုကျယ်ပြန့်သောတာယာနှိုင်းယှဉ်တာယာများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ကျောက်ဆောင်များသို့မဟုတ်အခြားအတားအဆီးများကိုထိမိသည့်အခါ ပို၍ ကျယ်သောတာယာသည်စတီယာရင်အပေါ်တွင် ပို၍ သြဇာသက်ရောက်နိုင်သည်။
ထို့ကြောင့်လမ်းပေါ်ရှိအတားအဆီးများကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသောမလိုလားအပ်သောအပြောင်းအလဲများအတွက်တာယာတာယာသည်အထိခိုက်မခံပါ။ ဒါကြောင့်ဒါကရှေ့တာယာတွေရဲ့နောက်တာယာတွေကျဉ်းမြောင်းနေရတဲ့အကြောင်းရင်းရဲ့တစိတ်တပိုင်းဖြစ်ပြီး၊ ဒါကရှေ့လမ်းတာယာပါးလွှာတဲ့ Find off-road bikes တွေအများကြီးရှိရတဲ့အကြောင်းရင်းရဲ့အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပေမယ့်ငါတို့မပြီးသေးဘူး။ အဘယျသို့သောအခြားအလုပ်အကိုင်များ? ရှေ့နှင့်နောက်တာယာလုပ်ပါသလား။ သင်ဘရိတ်နှင့်အရှိန်မြှင့်သောအခါဘာဖြစ်သွားမလဲ လွှဲပြောင်းဝန်။
Braking သည်ဘီးကိုရှေ့သို့ရွှေ့သည်။ ၎င်းသည်ရှေ့တာယာကိုအားသွင်းပြီးနောက်တာယာပေါ်တွင်ဝန်ကိုသက်သာစေသည်။ Accelerating သည်နောက်တာယာကိုအားသွင်းပြီးရှေ့တာယာကိုထုတ်ပေးသည်။ ရှေ့တာယာများ။
တာယာများကိုအားသွင်းသောအခါအပူချိန်မြင့်တက်လာသည်။ အပူချိန်မြင့်တက်လာသည်နှင့်အမျှတာယာများသည် ပို၍ ခံနိုင်ရည် ရှိ၍ အလွန်အေးသောတာယာထက် ပို၍ ချုပ်ကိုင်ထားနိုင်သည်။ ယခုတာယာအများစုတွင်အကောင်းဆုံးလည်ပတ်မှုအပူချိန်ဟုလူသိများသည်။
တာယာများသည်ဤအပူချိန်အကွာအဝေးတွင်ရှိလျှင်၎င်းတို့သည်အမြင့်ဆုံးသောဆုပ်ကိုင်မှုကိုပေးသည်။ ရလဒ်အနေဖြင့်တာယာများသည်အလွန်အအေးခံ။ ချုပ်ကိုင်ထားမှုသိပ်မများသော်လည်း၊ အပူလွန်ကဲနိုင်သည်၊ အလွန်အကျွံ ၀ တ်စားဆင်ယင်မှုနှင့်အစွန်းရောက်သောအခြေအနေများတွင်နင်းခြင်းသည်အသေကောင်နှင့်ကွဲနိုင်သည်။ ပိုမိုကျယ်ပြန့်သောတာယာသည်အပူမပေးမီ ပို၍ ဝန်လေးနိုင်သည်။ တာယာများနှင့်ပတ်သတ်သောအရာအားလုံးအတူတူပင်ဖြစ်သော်လည်းကျဉ်းမြောင်းသောတာယာနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်; နောက်တာယာသည် power transfer မှမြေကြီးသို့ကြီးမားသောဝန်များကိုတွေ့သည်နှင့်အရှိန်မြှင့်သောအခါဖြစ်ပေါ်သည့် load transfer ။
ဤသည်နောက်ဘက်တာယာရှေ့တာယာထက်ပိုမိုကျယ်ပြန်ဖြစ်ကြောင်းအကြောင်းပြချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒါကြောင့်သူတို့မြင်တဲ့စိတ်ဖိစီးမှုကနေအပူမပေးပါဘူး။ ရှေ့တာယာကိုလည်ပတ်အပူချိန်အတွင်းထိန်းသိမ်းထားရန်လည်းအရေးကြီးသည်။
သင်အရှိန်မြှင့်သောအခါ, ဝန်နောက်ဘက်သို့ပြောင်းရွှေ့ကြောင်းကိုဆိုလိုပြီးသောငါတို့ဆိုလိုသည်မှာလည်းရှေ့စိတ်သက်သာရာကိုဆိုလိုသည်။ ကောင်းပြီကဆေးရုံကဆင်းလာလျှင်? အပူချိန်ကျသွားတယ်။ တာယာအအေးလွန်ကဲခြင်းကိုကျွန်ုပ်တို့မလိုလားပါ။ ဆိုလိုသည်မှာ၎င်းသည်ဒဏ်ခံနိုင်မှုနည်းပြီးကိုင်တွယ်မှုနည်းသည်ဟုဆိုလိုသည်။
ရှေ့တန်းတာယာကျဉ်းမြောင်းသည့်အခြားအကြောင်းအရင်းတစ်ခုမှာ၎င်းကို၎င်း၏လည်ပတ်မှုအပူချိန်အတွင်းထားရှိရန်ဖြစ်သည်။ သင်ဘရိတ်နှင့်စတင်လှည့်သောအခါ၊ ဤတာယာသည်၎င်း၏လည်ပတ်မှုအပူချိန်အတွင်းကျိန်းသေလိုသည်။ တာယာများနှင့်ဆိုင်သောဝန်ကိုအကျိုးသက်ရောက်သည့်နောက်ရှုထောင့်တစ်ခုမှာဆိုင်ကယ်၏အလေးချိန်ကိုဖြန့်ဝေခြင်းဖြစ်သည်။
ရိုးရိုးရှင်းရှင်းပြောရလျှင်အလေးချိန်သည်ရှေ့တွင် / မည်သို့ဖြန့်သည်ကိုကြည့်ပါ။ အားကစားမော်တော်ဆိုင်ကယ်အများစုကို ၅၀/၅၀ ပုံမှန်အလေးချိန်ဖြန့်ဝေခြင်းဖြင့်သတ်မှတ်သည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့နားလည်ရန်လိုအပ်သောအလေးချိန်ဘက်လိုက်မှုသည်တည်ငြိမ်သောအလေးချိန်ဘက်လိုက်မှုနှင့်ကွဲပြားလိမ့်မည်။
ဒိုင်းနမစ်အလေးချိန်ပုံပျက်မှုသည်ဆိုင်းထိန်းစနစ်ကိုလေဖြတ်စေသောနေရာတွင်သက်ရောက်သည်။ တကယ့်ကမ္ဘာကြီးတွင်မော်တော်ဆိုင်ကယ်အများစုသည်ဖြောင့်သောလမ်းပေါ်တွင်စီးနင်းသောအခါနောက်ဘက်ကိုယ်အလေးချိန်ပျက်ခြင်းရှိသည်။ အဘယ်ကြောင့်အလေးချိန်ပုံပျက်နှင့်နောက်ဆုံးတွင်ဖြစ်သနည်း ဝန်လွှဲပြောင်း, ဒါအရေးကြီးတယ်? အရေးအကြီးဆုံးကတော့တာယာကိုဒေါင်လိုက်အင်အားသုံးလေလေ၊ ဖမ်းယူနိုင်လေလေဖြစ်သည်။
သင်ဤသည်ကိုမြည်းကြိုးကိုဖြည်။ မြေတစ်ပြင်လုံးသို့လျှောချခြင်းဖြင့်စစ်ဆေးနိုင်သည်။ သင်ကအားထုတ်မှုများစွာမရှိဘဲလျှောလိမ့်မည်ဟုသင်မြင်လိမ့်မည်။ သို့သော် အကယ်၍ သင်က၎င်းကိုဖိအားပေးပြီး၎င်းကိုလျှောရန်ကြိုးစားပါက၎င်းကိုသင်လုံးလုံးလျားလျားလျှော့ချနိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
သို့သော်တာယာပေါ်တွင်ဝန်တိုးပွားလာခြင်းနှင့်အတူပွတ်တိုက်မှုကိန်းလျော့နည်းသွားသည်နှင့်အမျှဤနှုန်းသည်အမြန်နှုန်းလျော့ကျခြင်းနှင့်အတူဖြစ်လာလိမ့်မည်။ ဤဖြစ်စဉ်ကိုတာယာဝန်၏ထိခိုက်လွယ်မှုဟုလူသိများသည်။ ၎င်းသည်ပိုမိုကျယ်ပြန့်သောတာယာများသည်ယေဘုယျအားဖြင့်ကျဉ်းသောတာယာများထက် ပို၍ ချုပ်ကိုင်ထားရသည့်အကြောင်းရင်းများစွာအနက်မှတစ်ခုဖြစ်သည်။ (စိတ် ၀ င်စားသူများအတွက်အခြားအကြောင်းပြချက်များမှာစက်ပြင်လုပ်ခြင်း၊ ချုပ်ကိုင်ခြင်းနှင့် ၀ တ်ဆင်ခြင်းတို့ဖြစ်သည်။
ဤဆောင်းပါး၌ဤအရာကိုကျွန်ုပ်မလေ့လာပါ။ ၎င်းသည်ရှည်လွန်းလိမ့်မည်။ ) ထို့ကြောင့်၎င်းသည်ရှေ့နှင့်နောက်တာယာအကျယ်နှင့်မည်သို့ဆက်စပ်သနည်း။ ကောင်းပြီ၊ ရှေ့နှင့်နောက်တာယာများအကြားချုပ်ကိုင်ထားမှုကိုကျွန်ုပ်တို့ဟန်ချက်ညီစေလိုသဖြင့်စက်ဘီးသည်ကြိုတင်ခန့်မှန်းတွက်ချက်မှုပြုနိုင်သည်။ နောက်ဘီးသည်ရှေ့ထက် ပို၍ ဝန်ကိုတွေ့သောကြောင့်၊ ချုပ်ကိုင်ထားမှုကိုဟန်ချက်ညီစေရန်နည်းလမ်းတစ်ခုမှာရှေ့ဘီးထက်နောက်ဘီးကို ပို၍ ကျယ်စေသည်။
သဘာဝကျပါတယ်လား ရှေ့နှင့်နောက်တာယာများကိုချိန်ညှိရာတွင်ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည့်အခြားရှုထောင့်များမှာ - - ကျယ်ပြန့်သောတာယာများသည်ကျဉ်းမြောင်းသောအလေးချိန်ထက်ပိုသည်။ ဆိုလိုသည်မှာအပိုထပ်ဖြည့်ခြင်းမရှိသောဒြပ်ထုကြောင့်ဆိုင်းငံ့မှုအတွက်ခက်ခဲသည်။ သင် 'ဒါဟာဒုံးပျံသိပ္ပံမဟုတ်ပါဘူး' ဝါကျကြားသိစေခြင်းငှါ
ကောင်းပြီ၊ ဒါကဒုံးပျံသိပ္ပံမဟုတ်ဘူး၊ ဆိုင်ကယ်ဒိုင်းနမစ်ပဲ။ သငျသညျထိုကဲ့သို့သောအကြောင်းအရာပိုမိုကြည့်ရှုလိုလျှင်ငါ့ရုပ်သံလိုင်းစာရင်းသွင်းရန်သတိရပါ။
လမ်းအများစုစက်ဘီးနှင့် Tourစက်ဘီးရှိသည်ပါးလွှာတာယာများ, တောင်နေစဉ်စက်ဘီးကြီးမားတဲ့အဆီရှိတာယာ။ ကုမ္ပဏီတစ်ခုပါးလွှာသောကတ္တရာမျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်တာယာသိပ်ပြားလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။ တာယာသည်အောက်ခြေတွင်ပြားချပ်ချပ်နည်းလေလေမျက်နှာပြင်lessရိယာနည်းလေလေဖြစ်သည်။ ဤကိစ္စတွင်ထိတွေ့မှုလျော့နည်းခြင်းသည်ပွတ်တိုက်အားနည်းပြီး၊နောက်ထပ်မြန်နှုန်း။
TO သို့ကျဉ်းသောတာယာ၏တိုကျရိုကျသောareaရိယာမှာလှိမ့်မှုဒဏ်ကိုလျော့နည်းစေသည်၊ အလှည့်အနေဖြင့်၎င်းသည်လေခွင်းအားတိုးတက်စေသဖြင့်သင်အားထုတ်မှုနည်းသည်။ အကောင်းဆုံးကတော့၊ တာယာရဲ့အချင်းသည်ဘရိတ်အုပ်အကျယ်ထက် ၂-၄ မီလီမီတာထက်နည်းလျှင်အကောင်းဆုံးလေခွင်းစွမ်းရည်ကိုသင်ရရှိမည်ဖြစ်သည်။
သင်၏စက်ဘီးပေါ်တွင်သင်တပ်ဆင်ထားသောတာယာများသည်ကွဲပြားခြားနားသောရည်ရွယ်ချက်များကိုလုပ်ဆောင်နိုင်ပြီးသင့်အတွက်မှန်ကန်သောတာယာကိုရွေးချယ်ခြင်းသည်မယုံနိုင်လောက်အောင်ခက်ခဲနိုင်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ထိုတာယာစကင်ဖတ်စစ်ဆေးမှုအားလုံးသည်ကျွန်ုပ်တို့၏စက်ဘီးစီးခြင်းကိုအကြီးအကျယ်အကျိုးသက်ရောက်ပြီးနောက်၎င်းသည်အောင်ခြင်းသို့မဟုတ်ရှုံးနိမ့်ခြင်းသို့မဟုတ်ကျဆုံးခြင်းသို့မဟုတ်ကင်မရာမတူခြင်းများကိုဆိုလိုသည်။ t ဒါကြောင့်ဒီနေ့ငါအရင်စက်ဘီးတာယာတွေရွေးချယ်တဲ့အခါစဉ်းစားရမယ့်ထိပ်တန်းစဉ်းစားချက်အချို့ကိုသွားမယ်။ မင်းရဲ့စက်ဘီးမှာတပ်ဆင်ထားတဲ့တာယာတွေဟာသင်စက်ဘီးနဲ့သင်စက်ဘီးမှာလုပ်နိုင်သမျှအကုန်အကျသက်သာတဲ့အဆင့်မြှင့်တင်မှုတစ်ခုဖြစ်နိုင်တယ်။ အခြားသူများသင့်ဆိုင်ကယ်နှင့်တွဲဖက်သည့်အစိတ်အပိုင်းများ၊ ၎င်းတို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏စီးနင်းမှုသက်တောင့်သက်သာရှိခြင်း၊ အမြန်နှုန်းဖြင့်ကိုင်တွယ်ခြင်းနှင့်ကိုင်တွယ်ခြင်းနှင့်လမ်းပြိုကျမှုများကိုပြုပြင်သည့်လမ်းဘေးဘက်တွင်ကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုနိုင်သောအချိန်တို့ကိုအကြီးအကျယ်သက်ရောက်မှုရှိနိုင်သည်။ ငါတို့အသစ်ရွေးချယ်လိုက်သောအခါကျွန်ုပ်တို့၏ကံမကောင်းမှုကလူတိုင်းနှင့်လိုက်ဖက်သည့်တာယာတစ်ခုတည်းသို့မဟုတ်အရာအားလုံးကိုထိမိသည့်မှော်တာယာတစ်ခုမျှမရှိပါ။ အများအားဖြင့်၊ သင်သည်နယ်မြေတစ်ခုတွင် ဦး စားပေးဆောင်ရွက်သောကြောင့်အခြားတစ်နေရာ၌အလျှော့ပေးလိုက်လျောရမည်။ သာဓကအားဖြင့်ပိုမိုနူးညံ့။ ပိုမိုနူးညံ့သောတာယာသည်အမှန်တကယ်ပင်ထိုးဖေါက် ၀ င်ရောက်မှုများပိုမိုဖြစ်နိုင်သည်၊ သို့သော်ထိုအခါ ပို၍ ထိုးဖောက်နိုင်သည့်တာယာများသည်ပိုမိုခက်ခဲပြီး ၀ ယ်လေယာဉ်များနှင့်သင်မည်သည့်တာယာကို ၀ ယ်ယူမည်ကိုပြောပြရန်နှေးကွေးသည့်တာယာတွင်ပိုမိုကုန်ကျနိုင်သည်။ သတင်းအချက်အလက်များကိုတတ်နိုင်သလောက်ဖြည့်ဆည်းပါရန်သင်တာဝန်ကျေပွန်ပါသည်။ တာယာတွင်အမြန်နှုန်း၊ သက်တောင့်သက်သာရှိမှု၊ ကိုင်တွယ်မှု၊ သက်ရောက်မှုကိုခံနိုင်ရည်စသည်တို့ကိုသင်ကိုယ်တိုင်ဆုံးဖြတ်နိုင်သည်။
၎င်းသည်တစ်နှစ်တာကာလအတွင်းလည်းပြောင်းလဲနိုင်သည်။ ဥပမာဆောင်းရာသီရောက်နေသောဗြိတိန်နိုင်ငံ၌ရှိသကဲ့သို့ကျွန်ုပ်၏ ဦး စားပေးမှုများသည်ပြောင်းလဲသွားသည်။ ငါသက်ရောက်မှုကိုခံနိုင်ရည်ပိုမိုချုပ်ကိုင်ထားသည့်လည်စည်းကိုကျွန်ုပ်ရှာဖွေနေသည်။ နွေရာသီသို့သွားသောအခါလမ်းစိုစွတ်သောလမ်းများချောသောလမ်းများရှိသည်။ ရေသို့သွားသည်။ ထို့နောက်ငါပြေးဆွဲခြင်းကိုရှာဖွေသည်။ ကွဲပြားခြားနားသောအရာများနှင့်ကျွန်ုပ်တို့မဆက်ဆံမီသင့်အတွက်အမျိုးမျိုးသောတာယာရွေးစရာများကိုသွားကြည့်ကြပါစို့။ အဓိကရွေးချယ်စရာသုံးခုရှိသည်။ ဤနေရာတွင်ကျွန်ုပ်တို့တွင် tubular နှင့် tubeless clincher ရှိသည်။ ယနေ့အသုံးအများဆုံးရွေးချယ်မှုသည်လွယ်ကူစွာအသုံးပြုနိုင်သောကြောင့် clincher နှင့် simple ဖြစ်နိုင်သည်။ ဘက်စုံသုံးခြင်းအားဖြင့်ယခုအခါ၎င်းတို့သည်ဘီး၏အတွင်းပိုင်းအနားသို့ခိုင်မာစွာနှင့်လုံလုံခြုံခြုံရိုက်ယူနိုင်သည့်ဝါယာကြိုးတစ်ခုသို့မဟုတ်ပုတီးစေ့အစွန်းရှိကြသည်။ ထို့နောက်အတွင်းပိုင်းတာယာဖြင့်သင်၌ပြွန်ပြားတစ်ခုတပ်ဆင်ထားလျှင်အလွယ်တကူရိုက်နိုင်သည့်တာယာယူသည်။ ၎င်းကိုပြွန်ထဲထည့်ပြီးတစ်ခုအသစ်တစ်ခုကိုထည့်ပါသို့မဟုတ်ရေပိုက်ထဲပြန်ထည့်ပြီးပြန်ထည့်ပါ၊ ၎င်းသည်အလွန်အဆင်ပြေသည်၊ အသုံးပြုရန်အလွန်လွယ်ကူသည်၊ အချို့သောသင်၌တွေ့နိုင်သောစွမ်းဆောင်ရည်အကျိုးကျေးဇူးများကိုလည်းအမှန်တကယ်မျှဝေသည် အခြားရွေးချယ်စရာများ tha ကျွန်တော်တို့ကို tubeler option ကိုခေါ်သွားပါ။ ပြိုင်ပွဲအတွက်ပိုပြီးအသုံးများပါလိမ့်မယ်။ အရင်တုန်းကဆိုရင်လွန်ခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်ကပိုပြီးပေါ့သွားလို့ပေါ့။ သူတို့ကပေါ့ပါးလာပြီးခုခံအားနည်းလာတယ်။ သူတို့ဟာအခြေခံအားဖြင့်တစ်ခုတည်းသောပြွန်တစ်ခုဖြစ်ပြီးသူတို့ရဲ့ပြွန်တွေကိုအခုချုပ်ထားတယ်။ ဆိုလိုတာကသင်ကသူတို့ကိုဘီးပေါ်တင်ရန်အနားကွပ်ပေါ်မှာကပ်ထားဖို့ဒါမှမဟုတ်အနားကွပ်ကိုကပ်ထားဖို့လိုတယ်။ မင်းတို့ထိုးဖေါက်လိုက်တာကဒါကိုဖြေရှင်းဖို့ပိုပြီးပြaticနာဖြစ်နိုင်တယ်၊ ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မှာ tubeless tyre ရှိတယ်၊ clincher tyre နဲ့တူညီတဲ့ဂုဏ်သတ္တိတွေရှိတယ်၊ သူတို့ကအရမ်းဆင်တူတယ်၊ သူတို့ကဘီးရဲ့အတွင်းပိုင်းပရိုဖိုင်းနဲ့လိုက်ဖက်တယ်။ ဆိုလိုတာကသူတို့ပြောတာကသူတို့ဟာ tubeless မရှိဘူး၊ ဒီထဲကိုဝင်ဖို့မလိုပါဘူး၊ ဒီ tubeless တာယာကိုဘီးပေါ်မှာတပ်ဆင်ပြီးတာနဲ့သူတို့အများစုဟာအဲဒီလမ်းအတိုင်းလျှောက်သွားနိုင်တယ်၊ တာယာထဲကိုထည့်လိုက်တာနဲ့လမ်းတစ်လျှောက်ရှိတာယာထဲမှာအပေါက်ငယ်လေးတွေဒါမှမဟုတ်မျက်ရည်တွေကိုစုပ်ယူနိုင်အောင်လုပ်နိုင်တယ်။ ဒါကြောင့်သင်သွားတဲ့အခါအဲဒါကိုအသာပုတ်တာကိုရပ်တန့်စရာမလိုပါဘူး၊ သတိပြုရမည်မှာ၎င်းသည် t ကိုပိုမိုတင်းကျပ်သည် တပ်ဆင်ရန်ခက်ခဲရန်ခဲယဉ်းသည့်အတွင်းပိုင်းဘီးအနားကွပ်သည်ယခုတာယာအရွယ်အစားကိုရွေးချယ်ပါ။ ဤနေရာတွင်ရွေးချယ်စရာများစွာရှိသည်။ အရေးအကြီးဆုံးသုံးခုမှာ ၂၃ စင်တီမီတာ ၂၅ စင်တီဂရိတ်နှင့် ၂၈ စင်တီမီတာဖြစ်ရမည်၊ မီတာမီတာကိုရည်ညွှန်းသည်။ ထို့ကြောင့်တပ်ဆင်သောအခါတာယာ၏အကျယ်ကိုအကျယ်ဆုံးသောနေရာတွင်တိုင်းတာသည်။ လေအားဖြင့်မြန်ဆန်သောတာယာကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားသည်၊ သို့သော်မကြာသေးမီက ၂၅ စင်တီမီတာသည်အထက်သို့ရောက်ရှိခဲ့ပြီးပိုမိုလူကြိုက်များသည်။ ပိုမိုတိုတောင်းသော်လည်းပိုမိုကျယ်ပြန့်သောမြေမျက်နှာပြင်ရှိသည့်အတွက်အမှန်တကယ်အောက်ပိုင်းတွန်းကန်မှုကိုခံနိုင်ရည်ရှိသည်။ ထို့ကြောင့်ပိုမိုမြန်ဆန်သောတာယာသည်အားစိုက်ထုတ်မှုနည်းပါးသည်။
တကယ်တော့, ချုပ်ကိုင်ထားတိုးမြှင့်သောမြင့်မားသောလေခွင်းဆွဲရပ်တည်ချက်မှ ဦး ဆောင်လမ်းပြရန်, ဒါပေမယ့်သူ့ရဲ့လူကြိုက်များတိုးပွားလာနှင့်အတူပိုပြီးဘီးအမှန်တကယ် developedsp လျက်ရှိသည်အထူးသဖြင့် 25c တာယာနှင့်အတူအသုံးပြုမှုအတွက်ကျနော်တို့ကတကယ်တော့ဤအတာယာများနှင့်အတူပိုကောင်းတဲ့လေခွင်းလမ်းကြောင်းကိုကြည့်ရှုကျနော်တို့ပိုမိုကျယ်ပြန် 28c ရှိသည် ကျွန်ုပ်တို့ပြန်လည်တိုးပွားလာသည့်တာယာများ၌ပိုမိုကျယ်ပြန့်သောအဆက်အသွယ်hasရိယာရှိခြင်းကြောင့်အမှန်တကယ်လှိမ့်ခြင်းခံနိုင်စွမ်းလျော့နည်းစေပြီးအချို့တာယာများအပေါ်တွင်ချုပ်ကိုင်ထားနိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤတာယာအမျိုးအစားနှင့်လေခွင်းကျဉ်းကျဉ်းသောပြစ်ဒဏ်များကိုပိုမိုတွေ့ရသည်။ အထူးသဖြင့်ရှေ့ဘီးမှာပါ၊ ဒါပေမယ့်ကျွန်တော်သူတို့ကိုစက်ဘီးပေါ်ကလိုဒီမှာနောက်ဘီးတွေပိုပိုပြီးတွေ့နေရတယ်၊ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါကဒီနေရာမှာပြစ်ဒဏ်နည်းတာပဲ၊ ဒါပေမယ့်ငါကောဘယ်လိုလဲ။ ငါပြောတာကတာယာအသစ်မ ၀ ယ်ခင်ဘီးထုတ်လုပ်သူရဲ့အကြံပြုချက်တွေကိုသေချာစစ်ဆေးသင့်တယ်၊ အကယ်၍ မင်းကသင့်စက်ဘီးမှာရှိတဲ့ဘီးတွေဟာဒီအနားကွပ်အရွယ်အစားနဲ့လိုက်ဖက်ညီအောင်လုပ်နိုင်တယ်။ ကျယ်ပြန့်သောတာယာကိုအနားကွပ်တွင်အသုံးပြုခြင်းကဥပမာအားဖြင့်၎င်းသည်ငါဖမ်းယူချင်ချိန်တွင်၎င်းကိုမှန်ကန်စွာရရှိနိုင်ကြောင်းနှင့်လမ်းပေါ်တွင်တာယာမည်မျှထိန်းချုပ်ထားသည်ကိုလူသိများသောယုံကြည်ချက်နှင့်ဆန့်ကျင်။ မည်သည့်အရာကဆုံးဖြတ်သည်မှာ၎င်းအားလွဲချော်စေနိုင်သည်။ တာယာ၏အမှန်တကယ်မှာကျွန်ုပ်တို့၏လမ်းအပေါ်ကျွန်ုပ်တို့၏ချုပ်ကိုင်ထားမှုအပေါ်အနည်းငယ်သာသြဇာသက်ရောက်သည်။ အကြောင်းမှာကားတာယာသည်တာယာများသည်တာယာများထက်တာယာ၏အဓိကရော်ဘာဒြပ်ပေါင်းများနှင့်ရိုးရိုးဒြပ်ပေါင်းများပေါ်ရှိလမ်းကိုအထင်ကြီးစေနိုင်သောတာယာများထက် ပို၍ ခက်ခဲသည်။ သင် ပိုမို၍ ဆုပ်ကိုင်နိုင်သည်။ ၎င်းသည်ဒြပ်ပေါင်းများကိုပျော့ပြောင်းသည်၊ ထိုးဖောက်နိုင်မှုနည်းလေလေ၊ ပေါင်းစပ်ရန်ခက်ခဲလေလေသက်ရောက်မှုကိုခံနိုင်ရည်ရှိသော်လည်း၎င်းသည်ဆုပ်ကိုင်မှုနည်းလေလေဖြစ်သည်။ ငါသိတယ်၊ ဒါပေမယ့်မင်းတို့ပိုက်ဆံပိုသုံးချင်ရင်မင်းကဒြပ်ပေါင်းနှစ်မျိုးစလုံးကိုအမှန်တကယ်လုပ်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့ဒြပ်ပေါင်းတွေရှိတယ်။ သူတို့ထဲကတစ်ခုကလူကြိုက်အများဆုံးတစ်ခုကတော့ Continental Grand Prix လေးရာသီပဲ။ ဒါကငါသုံးခဲ့တဲ့အချိန်ပဲ။ နှစ်များတစ်လျှောက်ကုန်ပစ္စည်းများစွာသည်၎င်းကိုအဆင့်မြင့်နည်းပညာအမျှင်များနှင့်အတူရော်ဘာများကအားဖြည့်ပေးသကဲ့သို့ဘေးထွက်နံရံများကိုလည်းအားဖြည့်ပေးသည်။ ၎င်းသည်အလွန်ထိုးဖောက် ၀ င်ရောက်နိုင်ပြီးကောင်းမွန်စွာဆုပ်ကိုင်ထားနိုင်သည်။ ဆုပ်ကိုင်မှုကိုရှာဖွေရန်နောက်ထပ်နည်းလမ်းမှာဆောင်းရာသီအတွက်အထူးသင့်လျော်သည်။ အနိမ့်ဖိအားဖြင့်တာယာများကိုမောင်းနှင်ခြင်းသည်သိသိသာသာလှိမ့်နိုင်ခြင်းကိုသိသာစေပြီးမြေပြင်နှင့်ထိတွေ့မှုaရိယာများပြားလာခြင်းနှင့်ငါရိုးသားတယ်ငါတကယ်ရာသီဥတုဆိုးရွားခြင်းသို့မဟုတ်လမ်းပေါ်ရောက်နေခြင်းနှင့်လမ်းများဟာအမှန်တကယ်ချောကျိကျိဖြစ်နေကြောင်းတွေ့မြင်ခဲ့ရသည် ငါတကယ်တာယာတာယာကိုအနည်းငယ်ပိုပြီးတော့ဖိအားပေးလိုက်တယ်၊ တစ်ခုတည်းသောပြproblemနာကမင်းကိုအများကြီးထုတ်လွှတ်လိုက်တာနဲ့၊ နောက်ဆုံးမှာသင်စွန့်စားထွက်သွားနိုင်ပြီ၊ တာယာထဲမှာပြွန်နဲ့ပြားနေတယ်၊ ​​ဒါပေမယ့်ဒါက tubeless အမျိုးအစားများရဲ့ကောင်းကျိုးတွေထဲကတစ်ခုပါ။ အဲဒီမှာပေါ့ ' နိမ့်သောဖိအားဖြင့်သူတို့ကိုအမှန်တကယ်မောင်းနှင်နိုင်သည်။ သို့မှသာကျွန်ုပ်တို့သည်နွေရာသီသို့ပြောင်း။ ပြိုင်ပွဲပြန်စနိုင်မည်ဖြစ်သည့်အတွက်ပြားချပ်ပြားချပ်ပြားတစ်ချပ်ကိုစိတ်ပူစရာမလိုဘဲသူတို့ကိုအမှန်တကယ်မောင်းနှင်နိုင်သည်။ အဓိကအားဖြင့်တာယာအကျယ်၊ တာယာနင်းခြင်းနှင့်တာယာပေါင်းစပ်ခြင်းတို့ဖြင့်ဆုံးဖြတ်သည်။ ယခုကျွန်ုပ်တို့ပိုမိုကျယ်ပြန့်သောတာယာများသည်ယေဘုယျအားဖြင့်တာယာတာယာများထက်ပိုမိုကျဉ်းမြောင်းသောတာယာများနှင့်ပုံမှန်အားဖြင့်တာယာပေါ်ရှိနင်းခြင်းကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။ တာယာကိုချောချောမွေ့မွေ့ပိုမိုလေးလံသည့်တာယာထက်လှိမ့်ခြင်းခံနိုင်ရည်နိမ့်သော်လည်း၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်ပေါင်းစပ်။ လာသောအခါ ပို၍ စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ပိုမိုနူးညံ့သောဒြပ်ပေါင်းများပါသောတာယာများက ပို၍ ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရှိပြီး၊ နှင့်ပိုမိုခက်ခဲဝင်း။
ယခုဤနေရာတွင်ပြောစရာများစွာရှိသေးသည်၊ သို့သော်အခြေခံအားဖြင့် ပို၍ ခက်ခဲသောဒြပ်ပေါင်းများသည်လမ်းပေါ်ရှိ rivet များကဲ့သို့လမ်းပေါ်သို့ဝင်သွားသည့်လမ်းများကဲ့သို့ရွေ့လျားမှုပိုမိုမြန်ဆန်လာသည်။ ပို၍ ခက်ခဲသောဒြပ်ပေါင်းများသည်လမ်းများပေါ်ရှိထို rivets နှင့်ပြွန်များဖြင့်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရှိသောဒြပ်ပေါင်းများပုံပျက်။ အမှန်တကယ်ပျက်စီးနိုင်သည်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့သင်ဟာ mether ရှိနေသေးသည်ဟုမျှော်လင့်နေသောကြောင့်လမ်းပေါ်တွင်ရှိနေသောကြောင့်စွမ်းအင်ဆုံးရှုံးမှုကိုလျော့နည်းစေသည်။ ထို့ကြောင့်သင်ရှာနေသည့်အရာ ဦး ထုပ်ပေါ်ရှိတာယာသည်ချောချောမွေ့မွေ့ဖြစ်ပြီး ၂၅ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်တွင်အနည်းငယ်ကျယ်ပြန့်နိုင်သည်။ ရောနှောခြင်း၊ Victoria Corsa Speed ​​ကဲ့သို့သောအရာတစ်ခုသည်၎င်း၏ပြီးပြည့်စုံသောအမျိုးအစားဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ပျော့ပျောင်းသောအရောအနှောပြုလုပ်ရန်ကောင်းမွန်သောချောချောမွေ့မွေ့ပြီး ၂၅ မိုင်ကဲ့သို့သောအရာတစ်ခုကိုရလိုလျှင်၎င်းသည်တာယာများအပြင်ဖြစ်နိုင်သမျှအားလုံးဖြစ်နိုင်သည်ဟုဆိုနိုင်ပြီး Continental Grand Prix 5000 သည်သာဓကတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ဒြပ်ဆွဲအားနိမ့်သော်လည်း၎င်းသည်လေခနဲယဉ်ပါးမှုနိမ့်သော်လည်း၊ ထိုးဖောက်နိုင်မှုအလွန်နိမ့်သည်။ ဤဆောင်းပါးကိုမကောက်ယူမှီအချက်အနည်းငယ်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်နင်းပုံစံများသည်ကျွန်ုပ်တို့၌ချုပ်ကိုင်ထားမှုအပေါ်အနည်းငယ်သာအကျိုးသက်ရောက်သည်ဟူသောအချက်ကိုသိသာစွာဆွေးနွေးခဲ့သည်။ လမ်းပေါ်တွင်သွားနေသော်လည်းတာယာတွင်တာယာပိုများနေသဖြင့်ယင်းတိုးမြှင့်လိုက်သောအရှိန်သည်တာယာကိုတာရှည်ခံစေပြီးခံနိုင်ရည်ရှိစေသည်။ သင်မြေပြင်အနေအထားအမျိုးမျိုး၌ရှိနေပါကသင်ကြည့်ရှုရန်အတွက်၎င်းသည်ရွေးချယ်စရာကောင်းတစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်။
သို့သော်သင်စက်ဘီးပေါ်တွင်တာဘိုလေ့ကျင့်ရေးကိုသုံးနေလျှင်နောက်ဘီးကိုတာဘို၏နောက်ဘုံပေါ်တွင်တင်ပါကသတိထားပါ၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်သင်သည်ထိုနေရာတွင်ရှိနေပြီးအပူရှိန်ရှိသောကြောင့်သင်တာယာကိုအမှန်တကယ်ပင်ဟောင်းနွမ်းစေနိုင်သည်။ ပတ်ပတ်လည်နှင့်အထူးသဖြင့်နူးညံ့ပျော့ပျောင်းသောတာယာများဖြင့်သင်အလွန်လျှင်မြန်စွာပင်ပန်းနွမ်းနယ်နေသည့်အတွက်လမ်းပေါ်တွင်ဆွဲဆောင်မှုကိုလျော့နည်းစေသည့်အပြားလေးတစ်ခုဖြင့်အဆုံးသတ်နိုင်သည်။ ၎င်းသည်တကယ်ပင်လိုက်ဖက်သောခံစားမှုမျိုးဖြစ်လိမ့်မည်။ သင်လဲလှယ်ခြင်း၊ ထွက်ခြင်းများပြုလုပ်နိုင်သည်။ သင်အမှန်တကယ်ဖြစ်သည့်အချိန်တွင်တာဘိုအဆင်သင့်တာယာတပ်ဆင်ထားသည့်တာဘိုအပိုတပ်ဆင်ထားသည့်ဘီးအပိုတစ်ခုရရှိနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ပြောစရာများစွာရှိပါသည်၊ အကယ်၍ သင့်တွင်မေးခွန်းများရှိပါကသင့်အားဖြေဆိုရန်အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါကသင်အောက်ဖော်ပြပါမှတ်ချက်များအပိုင်းတွင် ၀ င်ရောက်စွက်ဖက်ရမည်ဖြစ်သည်။ Grand Prix 5000 တာယာသည်ကျွန်ုပ်အတွက်ဘုရားတစ်ဆူဖြစ်သည်ဟုဆိုရမည်။ ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်းငါကြိုက်နှစ်သက်ကြောင်းလေးရာသီဆောင်းရာသီအတွက်ကြွေပြားကွဲခြင်းနှင့်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးအနည်းငယ်ကျယ်ပြန့်ခြင်းနှင့်ငါဒီနေ့ဆောင်းပါးပျော်မွေ့မျှော်လင့်ပါတယ်ဆိုပါက, ဒါပေမယ့်ငါဖော်ပြခဲ့သကဲ့သို့ငါကြိုက်နှစ်သက်ပေမယ့်ကျွန်တော်တို့ကိုလူမှုမီဒီယာရှေ့ဆက်ကျွန်တော်တို့ကိုမမေ့မလြော့ပါနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုစာရင်းသွင်း ညာဘက်အောက်
သို့သော် Veeတာယာမကြာသေးမီက Co. , သည်ကမ္ဘာ့တီထွင်ခြင်းအားဖြင့်စာအိတ်ကိုတွန်းရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်အကျယ်ဆုံးအဆီဆိုင်ကယ်အကျယ် ၅.၀၅ လက်မရှိပြီး Snow Shoe 2XL ဖြစ်သည်။
လည်းပဲတိုးတက်လာသောလှိမ့ခုခံတစ် ဦး ကျယ်ပြန့်သူတို့ရဲ့အနိမ့်ဖိအားမှာလည်းစီးနင်းနှစ်သိမ့်ညီမျှ။ Atပိုမိုမြင့်မားလေကိုကျော်ပြီးအမြန်နှုန်း၊ ခုခံမှုသည် ပို၍ အရေးကြီးလာပြီး ပို၍ ကျဉ်းလာသည်သူတို့ရဲ့လျော့နည်းလှည့်အလေးချိန်ရှိပါတယ်။ စက်ဘီးစီးသူများအတွက်ပြိုင်ဆိုင်ရန်အတွက်၎င်းသည်တွန်းကန်အားခုခံခြင်း၊၁၂ ။ 2018 ။
သေးငယ်ဘီးသောသောစတီယာရင်ပိုမိုတုံ့ပြန်မှုရှိပါတယ်ဆိုင်ကယ်ပိုပြီး manoeuvrable ။ ဤသည်တင်းကျပ်စွာအလှည့်နှင့်စိုစွတ်သောမျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်ကူညီပေးသည်။ သို့သော်ပိုကြီးဘီးကြမ်းပြင်နှင့်ရော်ဘာပိုချိတ်ဆက်မှုကြောင့်ပိုမိုကောင်းမွန်သောဆွဲဆောင်မှုကိုရရှိသည်။10 2020 ။
ပြင်းထန်သောစက်ဘီးစီးသူများ (နှင့်ဤမျှလေးနက်မှုမရှိသောအချို့သူများ) သည်သူတို့၏အောင်စတိုင်းကိုစွဲလမ်းကြသည်ဆိုင်ကယ်။ ဟုတ်တယ်၊ ပေါ့ပါးတယ်ဆိုင်ကယ်သငျသညျအခြို့သောစွမ်းအင်ကိုကယ်တင်နိုင်ပါ။ ထိုအခါလက်မစည်းမျဉ်းပေါ်မှာအစုလိုက်အပြုံလိုက်ဖော်ပြသည်ဘီးframe ကိုအပေါ်နှစ်ကြိမ်အစုလိုက်အပြုံလိုက်ကဲ့သို့ဖြစ်၏။06.27.2016
သူသည် (၇) ရာခိုင်နှုန်းသောစမ်းသပ်မှုအမြင့်ဆုံးအဆင့်၌ပင် ၁ ပေါင်ကွာခြားမှုရှိသည်စက်ဘီး၂.၅ စက္ကန့်သာအသက်သာဆုံးကိုသာသိမ်းသည်ဆိုင်ကယ်ထိပ်ဆုံး ၇.၅ စက္ကန့်သာရောက်သည်မြန်မြန်အပြင်းထန်ဆုံးတစ်ခုထက်03/13/2015
လမ်းအများစုဆိုင်ကယ်frames များကိုတစ် ဦး လိုက်လျောညီထွေနိုင်ပါတယ်တာယာကျယ်ပြန့်အကြောင်းကို 28mm အဖြစ်။ Cyclocross နှင့် Tourစက်ဘီးယေဘုယျအားဖြင့်ကျယ်ပြန့်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲနေကြပါတယ်တာယာ။ ၂၃ မီလီမီတာနှင့်အကျယ် ၂၅ မီလီမီတာကိုကျွန်ုပ်တို့အကြံပြုပါသည်တာယာအပန်းဖြေလမ်းစက်ဘီးစီးသည်။ ၂၅ မီလီမီတာwidthခရီးဝေးသွားရန်အဆင်ပြေစွာစီးနင်းနိုင်ရန်အတွက်အဝေးပြေးကားစီးရန်အတွက်သင့်တော်သည်။
လမ်းဘေးဆိုင်ကယ်တာယာများ။ စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားသောလမ်းဘေးစက်ဘီးများကိုအဓိကအားဖြင့်ပြိုင်ကားများတွင်အသုံးပြုသည်။ သူတို့သည်အဘယ်ကြောင့်ပါးလွှာသောတာယာများတပ်ဆင်ရကြောင်းကိုရှင်းပြသည်။ ပါးလွှာသောတာယာများသည်လမ်းမျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်ဖိအားနည်းသည်။ ထို့ကြောင့်အခြားထူသောတာယာများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်၎င်းတို့သည်ပိုမိုမြန်ဆန်သောနှုန်းဖြင့်လှိမ့်နိုင်စေသည်။
၎င်းတို့ကိုကလေးများဆိုင်ကယ်များတွင်အများဆုံးတွေ့ရသော်လည်း ၁၆″ ဘီးများသည်သင်အရွယ်ရောက်ပြီးသောစက်ဘီးပေါ်တွင်ယေဘုယျအားဖြင့်သင်အသေးဆုံးစက်ဘီးဘီးဖြစ်သည်။ အရွယ်အစားသေးငယ်သည့်အရွယ်အစားရှိရန်၎င်းတို့ကိုအရွယ်ရောက်ပြီးသူခေါက်သည့်စက်ဘီးအချို့တွင်အသုံးပြုသည်၊
ပြင်ပတွင်တိုင်းတာသောအခါ ၁၉ မီလီမီတာအောက်ရှိအရာအားလုံးကိုကျဉ်းမြောင်းသည်ဟုယူဆရပြီး ၂၂ မီလီမီတာကျော်သောအရာများကိုကျယ်ပြန့်စွာစဉ်းစားနိုင်သည်။ အနီးကပ်အပြန်အလှန်ဆက်စပ်နေစဉ်ပြင်ပအနားကွပ်အကျယ်သည်ဘီးများလေခွင်းအားနည်းချက်ကိုအများအားဖြင့်လွှမ်းမိုးမည်ဖြစ်ပြီးအတွင်းပိုင်းအနားကွပ်အကျယ်သည်သက်တောင့်သက်သာရှိမှု၊